Viagra? Yonke into malunga noTywala yaseFlibanserin
/Blog/Flibanserin/Viagra? Yonke into malunga noTywala yaseFlibanserin
ezaposwa ngomhla 12 / 17 / 2017 by 阿斯劳 bha liweyo Flibanserin.
Isishwankathelo se-1 2.Yintoni iFlibanserin?
3.Yintoni iFlibanserin powder? 4.Yintoni iHSDD yabesifazane?
5.Yintoni unyango lwe-HSDD yabasetyhini? 6.Iphi iFlibanserin powder Works?
7.Flibanserin powder mechanism of action 8. Nguwuphi umahluko phakathi kweFlibanserin kunye neSildenafil / viagra?
9.I-Flibanserin powder ephephile? 10.Yintoni iFlibanserin powder esetyenzisiweyo?
11.Ifowuni yeFlibanserin ifanele isetyenziswe njani? 12.Ziziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela i-flibanserin?
13.Izithuba zeFlibanserin 14.Ukwazisa ngoFlibanserin
15.Iziphi iimpembelelo ezisezantsi zeFlibanserin? 16.Ukuthenga iPlibanserin Powder eluhlaza
17.Nokungathenga iFlibanserin Raw Powder
I-AASraw ngumenzi wobuchwephesha weziyobisi ze-sen enchancing, ezinje nge-tadalafil, dapoxetine, flibanserin…
Nceda ucofe apha ukuze ufumane ezinye iinkcukacha. Unxibelelwano nathi
Flibanserin i powder video
Flibanserin Abalinganiswa basisiseko
Ifomula yeMolekyuli: C20H21F3N4O
Ubunzima Ezinto: 390.4
Isishwankathelo somgubo weFlibanserin
I-Flibanserin powder, i-raw material ye-Flibanserin, edlalwa kwiipilisi zeFlibanserin / iipilisi, ibhinqa isondo sokuphucula isondo, eyayisetyenziswa phucula umnqweno wesini kunye nokunciphisa uxinzelelo lweemvakalelo kubafazi be-premenopausal abanesifo se-HSDD) .Nangona i-flibanserin ibizwa ngokuba yi "Viagra yabasetyhini", indlela esebenza ngayo yahluke kakhulu kuleyo Viagra. I-Viagra isebenza ngokwandisa ukuhamba kwegazi ukuya kwizitho zangasese, kanti i-flibanserin ingasebenza ngakumbi njenge-anti-depressant ngokulungisa ukungafani kwezi-neurotransmitters engqondweni ukuze kuncede ukubuyisela umnqweno wesini. Inempembelelo kwi-dopamine, i-norepinephrin, kunye namanqanaba e-serotonin ebuchosheni.
I-Flibanserin iza njengetyulethi kwaye isetyenziswa rhoqo imihla ngemihla, ngexesha lokulala.
Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo ze-flibanserin ziquka ukungcola, isisulu, kunye nokulala. I-Flibanserin inokubangela ukuphelelwa amandla, ngakumbi xa isetyenziswe ngotywala.
Ungathenga iFlibanserin kwivenkile okanye bathenge iFlibanserin online, Kwimarike, i-puirty yeFlibanserin ivela kwi-60-98% yobungcwele, xa ucinga ukuthenga i-Flibanserin powder online, into ebaluleke kakhulu kufuneka ikhathalele ngobungcwele.
Yintoni iFlibanserin? I-Flibanserin isilwanyana esiphucukisiwe ukuphatha ingxaki yesifo sengqondo esingaxhamliyo (HSDD) kubafazi. Abasetyhini abaneHSDD banako ukuhlala bengenasiphelo kwintlalo yesini engakwazi ukuchazwa ngenye imeko yonyango. I-HSDD nayo ihamba kunye neemvakalelo zokubandezeleka.
Ngamanye amaxesha, i-flibanserin ibizwa ngokuba yi "Viagra yowesifazane," kodwa eli gama alilona lichanekileyo. I-Viagra yisilwanyana esisetyenziselwa ukhathaza ukungasebenzi kwe-erectile kumadoda kwaye isebenza ngokuphucula ukuhamba kwegazi ukuya kwi-penis. Ngamanye amazwi, isebenza ngokubanzi kwizitho zangasese. UFlibanserin uhlukile ngenxa yokuba isebenza kwingqondo yomfazi.
Ingqondo idlalwa njengento ebaluleke kakhulu ibhinqa yesini. Uninzi lwakhe lomjikelezo wesondo luvela kwingqondo yakhe.
UFlibanserin usebenza kwiikhemikhali ezintathu zobuchopho ezibalulekileyo: i-dopamine, i-norepinephrin, kunye ne-serotonin. Ezi khemikhali ziyi-neurotransmitters. Banoxanduva lokuthumela iimpawu phakathi kwengqondo kunye nezinye iinxalenye zomzimba ngokusebenzisa inkqubo ye-nervous.
I-Dopamine kunye ne-norepinephrin ibandakanyeka ngesondo. Nangona kunjalo, i-serotonin inegalelo ekukhuselweni ngokwesondo kwaye inokunciphisa i-sex drive. Kucingelwa ukuba ukuba le michiza ayinakulinganiswa - ukuba i-dopamine kunye ne-norepinephrine amanqanaba aphantsi kakhulu kwaye / okanye ama-serotonin amanqanaba aphakamileyo - umfazi angase abe nomuzwa ongaphantsi wesini. UFlibanserin usebenza ngokuphakamisa amanqanaba e-dopamine kunye ne-norepinephrin ngelixa ehlisa amanqanaba serotonin. Ngale ndlela, iikhemikhali kunceda ukukhuthaza umnqweno wesini zonyuka kwaye enye inokukhusela umnqweno iyancipha.
Yintoni iFlibanserin powder?
I-Flibanserin umgubo eluhlaza, t, iBimt 17, iBimt-17-BS, iGirosa; 2H-Benzimidazol-2-nye, 1,3-dihydro-1- [2- [4- [3- (trifluoromethyl) phenyl] -1-piperaziny l] ethyl] -; IFlibanserin; iBimt17; 3- [2- [ 4- [4- (Trifluoromethyl) phenyl] piperazin-1-yl] ethyl] -1H-benzimidazol-2-nye; Filbanserin; Flibanerins; 1,3-Dihydro-1- [2- [4- [3- (trifluoromethyl) phenyl] -1-piperazinyl] ethyl] -2H-benzimidazol-2-nye, yinto ebonakalayo yeFlibanserin, uhlobo lwe-White crystalline powder, abathengisi abaninzi beemveliso ze-steroids bahlala bethenga ubunyulu obuphezulu beFlibanserin powder online, yenze zonke iintlobo kraca ugqibile uFlibanserin, inkcukacha zeFlibanserin apha ngezantsi:
I-Formula ye-Molecular: C20H21F3N4O
I-Melt Point: 225 ° C
Umbala: I-powder e-white crystalline
Ngaba iFlibanserin powder a ihomoni?
Ngaba iFlibanserin i-hormore? Cha, ayiqukethe i-estrogen okanye testosterone okanye nayiphi enye ihomoni. I-Flibanserinis yonyango lwe-psychotropic. it yenza ngokuthe ngqo kwi-neurons ye-serotonergic engqondweni, kwaye ineempembelelo ezingekho ngqo kwi-dopamine kunye ne-norepinephrin.
I-Serotonin ebuchosheni becingelwa ukuba ibeke iibhuleki ngesondo. I-Flibanserin inokukunceda ukuphucula kwi-serotonin system braking, ukuze i-libido ibuye kwakhona.
Yintoni i-HSDD yabesifazane?
I-HSDD, ebizwa ngokuba yi-Female Hypoactive Sexual Desire. I-Hemidal Sexual Desire Disorder (HSDD) ichazwa ngokuba umnqweno wesini oko kukhokelela kuxinzelelo kunye nobunzima phakathi kwabantu. I-HSDD sesona sifo sixhaphake kakhulu kwabasetyhini bayo yonke iminyaka. ”Abafazi abaneminyaka engama-20 ukuya kwengama-49 ubudala basemngciphekweni omkhulu wokufunyaniswa ukuba bane-HSDD, xa kuthelekiswa nabo bangaphambi kokuyeka ukuya exesheni, ngaphambi kokuba baye exesheni. , kunye notyando lwasemva kwexesha lokuyeka ukuya exesheni.
unokufumana le HSDD Xa ulandela iziganeko kunye nezibonakaliso:
Ukungabi neengcamango zesini okanye iingcamango
Inkxalabo ngenxa ye-low drive drive kunye nefuthe elibi kwiintsebenziswano
I-HSDD ibangelwa kubuninzi bezinto eziquka ukukhathala, ukungabikho kokuxhamla kunye neqabane, utshintsho lwe-hormonal ngenxa yokukhulelwa, ukubeletha, okanye ukuyeka umyeni, ukugula, imiba yengqondo, njl.
Iimpawu kunye neempawu ze-Sex Hypoactive Sexual Desire Disorder ziquka ukungabikho kweminqweno yesondo kunye neengcamango zesondo, kunye nokuxakeka ngenxa yeempazamo ezinjalo
Ukuxilongwa kweDesigned Drive Drive kwi-Women ngenxa ye-HSDD inokubandakanya ukuvavanya ngokomzimba, kwe-hormonal and psychological
Unyango luvame ukulungelelaniswa neemfuno zomntu ngamnye, kuba i-HSDD inokuba neyona nto inokubangela ukuba kubekho izinto ezininzi
Uninzi lwabasetyhini luzuza kunyango lwezizathu ezisisiseko ze-Hypoactive Sexual Desire Disorder
Yintoni yonyango lwe-HSDD yabesifazane?
Ngamanye amaxesha nje ukuba nencoko ephosakeleyo kunye neqabane lakho unokusombulula i-HSDD yakho. Unokukhetha ukuthetha nodokotela wakho, ngubani onokukubuza malunga nembali yolwalamano kunye neengxaki zengqondo ezedlulileyo eziphathelene nokuziphatha ngokwesini. Ugqirha wakho unokujonga kwakhona izimo zonyango. Ekugqibeleni unokuncedwa ngu:
Umntu ngamnye okanye izibini zesondo zonyango.
Unyango lwengxaki yonyango.
Unyango lweHormone. I-hormone yokulinganisela unyango kubasetyhini kunye ne-testosterone supplementation kubafana abathile abanamaqondo aphantsi e-testosterone banokwandisa umnqweno wesini.
Ukongeza okanye ukuguqula amayeza. Ngamanye amaxesha ingxaki ye-HSDD ixazululwa nje ngokutshintsha amayeza, ukusuka kwisicuku esingasetyenziswayo esingasisigxina sokuphazamisa isifiso sesondo, umzekelo, kwesinye sezidakamizwa ezitsha kunye nemiphumo emibini. Ukongezwa kwamanye amayeza kwiimeko eziphantsi - ezifana ne-Levodopa ezisetyenziselwa ukuphatha isifo sika-Parkinson-sele ifunyenwe ukunceda ngesifiso sesini somntu, umzekelo, ngokunyusa umveliso we-neurostransmitter dopamine.
Ukongezelela, abaphandi bafunda ukhuseleko kunye nokusebenza kweendlela ezininzi zokonyango. Ezi ziquka ipaki ye testosterone yabasetyhini, eye yabonisa ukuba luncedo emva kokumisa umva okanye ukukhishwa kwamathambo amaqanda-apho ininzi ye-testosterone yomfazi ikhiqizwa. Ezi zimbini zokuxhatshazwa, i-flibanserin kunye ne-bupropion, ziphakathi kwezidakamizwa ezifundiswa kunyango lwabasetyhini abasengaphambili.
I-Flibanserin powder isebenza njani?
UFlibanserin sisiyobisi somlomo esisetyenziselwa ukunyanga inkanuko yesini kwabasetyhini, ukunyanga ukungahambi kakuhle ngokwesini (HSDD) kwabasetyhini.I-Flibanserin isebenza ngokwandisa amanqanaba e-dopamine kunye ne-norepinephrine ngelixa ithoba amanqanaba e-serotonin. Ngale ndlela, iikhemikhali ezinceda ukukhuthaza umnqweno wesini ziyonyuswa kwaye enye enokuthintela umnqweno iyancipha. IFlibanserin ichaphazela indlela esebenza ngayo ingqondo ngokungenelela kunxibelelwano phakathi kwemithambo-luvo yengqondo kwiindawo zobuchopho ezilawula umnqweno wesini kunye nolunye uvakalelo olonwabisayo. Imithambo-luvo iyanxibelelana ngokwenza nokwenza ukukhupha imichiza ebizwa ngokuba zii-neurotransmitters. Ii-neurotransmitters ziya kwezinye ii-nerves ezikufuphi apho zincamathisela kwii-receptors kwimithambo-luvo. Ukuncamathiselwa kwee-neurotransmitters kunokukhuthaza okanye kuthintele ukusebenza kweemvakalelo ezikufutshane. UFlibanserin uvimba ii-receptors ezininzi kwimithambo-luvo kubandakanya uhlobo lwe-dopamine 4, kunye nohlobo lwe-serotonin 2A, 2B kunye ne-2C receptors. Ikwakhuthaza kwakhona uhlobo lwe-serotonin 1A. Ezi ziphumo ziyiphucula njani inkanuko yesini kwabasetyhini ayaziwa. Oososayensi bacinga ukuba i-flibanserin inokulawula iindawo zobuchopho ezilawula umnqweno wesini kwabasetyhini be-premenopausal abanomdla ophelileyo wesini kunye nomnqweno.
Iyiphi indlela yeFlibanserin powder yesenzo?
Cetywayo Flibanserin powder Indlela yokusebenza ibandakanya ukulawulwa kweekhemikhali ezininzi zeengqondo ezingasichaphazela umnqweno wesini, nangona indlela echanekileyo ayikwazi ngokupheleleyo. I-Flibanserin yi-post-synaptic ye-5HT1A ye-receptor agonist kunye ne-5HT2A i-receptor antagonist, njengoko kuphawulwe kumaxwebhu eenkcukacha ze-FDA, kwaye isenzo kwisantya se-nervous central. Umenzi uthi u-flibanserin ulungisa ukungalingani kwe-dopamine kunye ne-norepinephrine (zombini uxanduva lwesondo), ngelixa kunciphisa amanqanaba e-serotonin (obangela uxanduva lwezesondo / inhibition). I-Flibanserin ayilona isistim ye-hormone kwaye ayichaphazeli ukuhamba kwegazi njengenkalo yezilwanyana ezivunyiwe kumadoda ane-erectile dysfunction.
Nguwuphi umahluko phakathi kweFlibanserin kunye neSildenafil? (Addyi vs)
Ukusabalalisa ngokuphambene nokugqithisileyo kokuqala, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iViagra, imithi yokuqala yokuphatha iingxaki zokumisela kumadoda, ibomvu okombala, ngelixa i-Addyi ithinki. Kwakhona esinye isizathu esinesizathu sokukhetha i-Viagra njengomzekelo wethu ukususela kwamanye amayeza angenasiphene kwimithi eyahlukahlukeneyo eya kuba idibanisa izinto.
Baphatha Iifom ezahlukeneyo zesini:
I-addyi, isithako esisebenzayo saloo nto i-flibanserin, iithagethi zinciphisa umnqweno wesini kubasetyhini, ngoxa i-Viagra (sildenafil) yenzelwe ukwenza kube lula kubantu abangenamandla ukufumana nokugcina i-erection.
Nangona amanye amadoda ehlupheka ngenxa yokulahlekelwa yi-libido, i-Viagra ayikho inceda ekutshiseni imililo yomnqweno, leyo ingaba yingxaki yengqondo okanye ivela kwiinkalo zengqondo kunye nezobomi. Ukucebisa, ukuxhatshazwa kweengxaki, kunye neyeza zokunyusa amanqanaba e-testosterone womntu kunokunceda ukunqoba iingxaki ezinjalo, kodwa i-Viagra kunye nezinye izidakamizwa ezingenakukwazi ukuzenza.
Iindlela abazenzayo zihlukileyo:
I-Viagra yayingowokuqala kwi-PDE5 inhibitors, isilwanyana esisetyenziselwa ukuphatha ukungasebenzi kwe-erectile kumadoda kwaye isebenza ngokuphucula ukuhamba kwegazi kwi-penis. Ngamanye amazwi, isebenza ngokubanzi kwizitho zangasese. UFlibanserin uhlukile ngenxa yokuba isebenza kwingqondo yomfazi.
Ingqondo idlalwa njengento ebaluleke kakhulu yesini. Ubuninzi bomjikelezo wakhe wesigxathu sowesondo buvela kwingqondo yakhe. UFlibanserin usebenza kwiikhemikhali ezintathu zobuchopho ezibalulekileyo: i-dopamine, i-norepinephrin, kunye ne-serotonin. Ezi khemikhali ziyi-neurotransmitters. Banoxanduva lokuthumela iimpawu phakathi kwengqondo kunye nezinye iinxalenye zomzimba ngokusebenzisa inkqubo ye-nervous. I-Flibanserin isebenza ngokuphakamisa amanqanaba e-dopamine kunye ne-norepinephrin ngelixa ihlehlisa amanqanaba e-serotonin. Ngale ndlela, iikhemikhali ezikunceda ukukhuthaza umnxuwa wesondo zonyuka kwaye enye inokukunqanda umnqweno iyancipha.
Yenza imihla ngemihla okanye kufuneka uyithathe:
Uhlobo olubalulekileyo kakhulu phakathi kwe-flibanserin kunye neViagra kunye nezinye izidakamizwa ezingenasiphene kwindlela ezithathwa ngayo. Ukufumana iziphumo ezifanelekileyo, i-flibanserin kufuneka ithathwe imihla ngemihla. Ngokwahlukileyo, i-Viagra kunye nayo yonke enye ye-PDE5 inhibitors ithathwa kwisiseko esifanelekileyo, ngokuqhelekileyo imizuzu ye-30 ukuya kwiyure ngaphambi kokuba umsebenzi wesondo ulindeleke ukuba kwenzeke. Ukuphela kwezilwanyana ezingenasiphelo kwizidakamizwa ezingenasiphelo seMveli kwi-Daily Use, okufuneka kuthathelwe imihla ngemihla ukuvumela amadoda ukuba aphumelele ukulungiswa xa kukho imfuneko okanye umnqweno.
Imiphumo emibi Ukungafani:
Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo ezichazwe ngabathathi-nxaxheba kwizifundo zonyango ze-flibanserin zilele, ngokukodwa xa zidibene nokusetyenziswa kotywala, ukuphazamiseka kwesinye isikhathi kunye nokunciphisa uxinzelelo lwegazi.
I-Viagra nayo ibangela ukulahla kwexeshana kwixinzelelo legazi, okwenza ukusetyenziswa kwayo kungahambelani neziyobisi ezisekelwe kwi-nitrate ezenza into efanayo. Nangona kunjalo, iimpembelelo eziqhelekileyo eziqhelekileyo zepilisi encinci ye-blue zibuhlungu buhlungu, ukuxubha, intloko, ukunyamezela, iintlungu zesisu okanye ukunyamezela, ukuxinwa kwamanzi kunye nesicathulo esininzi, esona sininzi sihlala sinyamalale xa sisetyenziswa ngokuqhubekayo kweziyobisi. Iziphumo ezibi kakhulu ze-Viagra ziquka ukulahleka ngokukhawuleza kokuva okanye umbono okanye ukulungiswa okuhlala ngaphezu kweeyure ezine.
Ngaba iFlibanserin powder ikhuselekile?
Is Flibanserin powder ikhuselekile? Ndibetha lo kunokuba ngumbuzo abantu abaninzi abagxila kuwo. I-Flibanserin sisiyobisi sokuqala esivunyiweyo yi-FDA "yesifo esingathandabuzekiyo," ngegama elingu-Addyi, elichazwe yi-FDA njenge "ibonakaliswa ngumnqweno ophantsi wesondo obangela uxinzelelo okanye ubunzima phakathi kwabantu kwaye ayisiyiyo." ngenxa yobukho bezonyango okanye imeko yengqondo, iingxaki kulwalamano, okanye iimpembelelo zonyango okanye ezinye iziyobisi. ”
Kwakhona ukufumana ngokukhawuleza kokuthengiswa kwelayisenisi ye-Addyi, i-Sprout Pharmaceuticals, yenkampani yaseCanada iValeant ye $ 1 billion ibonisa ukuba i-Addyi yinto ethile yokuzibulala-okanye, ubuncinane, ukuba i-hype yayo ininzi malunga nenzuzo kunokuncedisa abafazi. Kwaye ubungqina bubonisa ukuba ngaphandle.
Nangona kusemthethweni, kukhuselekile, kwaye kulawulo, kodwa ngamanye amaxesha kufuneka ulumke malunga neziphumo ebezingalindelekanga. Ungagqithisi, kunye nezinye iingcebiso, siza kuthetha kamva.
Yintoni ebizwa ngeFlibanserin powder?
Njengokuba sathetha ngaphambili, iFlibanserin isetyenziselwa ukuphatha abafazi ngesifo sengqondo sokuziphatha ngokwesini (HSDD; umnqweno ophantsi wesini obangela uxinzelelo okanye ubunzima bebonke) abangazange bafumane ukuyeka umyeni (utshintsho lobomi; ukuphela kwexesha lokuhamba kweenyanga). I-Flibanserin ayifanele isetyenziswe kunyango lwe-HSDD kwabasetyhini abaye baphumelela ekunqumeni kwindoda okanye kumadoda okanye ukuphucula ukusebenza kwezesondo. UFlibanserin useklasini yemithi ebizwa ngokuba yi-serotonin receptor 1A i-agonist / i-serotonin receptor 2A. Isebenza ngokutshintsha umsebenzi we-serotonin nezinye izinto ezingokwemvelo kwingqondo.
Ukusetyenziswa kweFlibanserin powder kufanele kusetyenziswe njani?
I-Flibanserin powder ivame ukuza njengetyulethi ukuthatha ngomlomo. Ngokuqhelekileyo kuthathwa rhoqo ngosuku kwixesha lokulala. Thatha i-flibanserin ngexesha lokulala imihla ngemihla. Landela izikhokelo kwiileyibrari yakho ngokuchanekileyo, uze ucele ugqirha okanye umkhemisi wakho ukuba achaze nayiphi na into ongaziqondiyo. Thatha i-flibanserin ngokuchanekileyo njengoko kulandelwe. Musa ukuthatha ngaphezulu okanye ngaphantsi okanye uthathe ixesha elide kunokuba ligqirha ugqirha wakho. Ukuba iimpawu zakho aziphucule emva kweeyure ze-8 zonyango, fownela ugqirha wakho.
Ngaphambi kokuba uthathe i-flibanserin powder
xelela ugqirha wakho kunye nekhemisti ukuba unobungozi kwi-flibanserin, nayiphina imithi, okanye nayiphi na isithako kwiiphilisi ze-flibanserin. Buza i-pharmist yakho okanye khangela iKhokhelo yeMithi kuluhlu lwezithako.
xelela ugqirha wakho kunye nekhemistiya ukuba yintoni enye imithi yokugulisa imithi kunye nokungabhalisi, iivithamini, izongezelelo zondlobo, kunye nemveliso yemveliso oyithathayo okanye uceba ukuyithatha. Qinisekisa ukukhankanya amayeza adweliswe kwisiqendu ESIBALULEKILEYO kunye naluphi na olu lulandelayo: izidandlululo ezinjenge-fluoxetine (Prozac, Sarafem); izibophelelo; cimetidine (Tagamet); digoxin (Lanoxin); i-diphenhydramine (i-Benadryl); unyango lwexhala okanye ukugula kwengqondo; amayeza okuthathwa njenge-carbamazepine (Epitol, Tegretol, Teril, abanye), phenobarbital, kunye ne phenytoin (i-Dilantin, iPhenytek); i-opiate (i-narcotic) imithi yokulawula ubuhlungu; zokukhulelwa komlomo; iproton pump inhibitors kuquka i-dexlansoprazole (Dexilant), esomeprazole (Nexium, Vimovo), i-lansoprazole (Prevacid), i-omeprazole (Prilosec), i-pantoprazole (i-Protonix), okanye i-rabeprazole (Aciphex); ranitidine (Zantac); rifabutin (i-Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, eRifamate, eRifater); ezimbi; sirolimus (Rapamune); iipilisi zokulala; kunye noxolo. Ugqirha wakho unokufuna ukutshintsha amanyathelo akho amayeza okanye ukubeka iliso ngononophelo kwimiphumo emibi.
xelele ugqirha wakho malunga nezinto eziphathekayo ezithathayo, ikakhulukazi i-ginkgo, i-resveratrol ne-St. Johns wort.
xelela ugqirha ukuba ukhulelwe, cwangcisa ukuba ukhulelwe, okanye uncelise. Ukuba ukhulelwe ngelixa uthatha i-flibanserin, biza ugqirha wakho. Ungasondli ngethuba xa uthatha i-flibanserin.
Kufuneka uyazi ukuba i-flibanserin inokukwenza ulele. Musa ukuqhuba imoto okanye usebenzise umatshini de ubuncinane kwiiyure ze-6 emva kwedoloji yakho ye-flibanserin uze ude wazi ukuba le nyilisi ikuchaphazela njani.
Ngelixa uthatha iPlibanserin powder
Nangona uthabatha uFlibanserin, nceda uqaphele oku:
I-Flibanserin kunye noTywala. Ukuxilisa utywala xa uthabatha u-flibanserin kunokubangela ukuphazamiseka kwingozi. Vumela ukusela utywala ngelixa usebenzisa le nyeza.
Flibanserin kunye neGrapefruit
Ngelixa uthatha iFlibanserin, sukuthatha iGrapefruit, okanye uthethe nogqirha wakho ngaphambi kokuba utye iidiliya okanye ijusi yeediliya ngelixa uthatha flibanserin.Iziqhamo zinokusebenzisana nendlela iilisi esebenza ngayo emzimbeni wakho.I-Llibanserin inokukwenza udizzy okanye ukhathele.
Musa ukuqhuba okanye ukwenza izinto ezifuna ukuphaphama de ube uyazi ukuba lichaphazela njani eli yeza. Kunqande ukuqhuba okanye ukusebenzisa oomatshini ubuncinci iiyure ezingama-6 emva kokuba uthathe i-flibanserin, kwaye de ube uyazi ukuba liza kukuchaphazela njani eli yeza. Ukuba nesiyezi okanye uxinzelelo lwegazi oluphantsi kunokubangela ukuwa okanye ezinye iingozi.
Gwema ukuthatha isongezelelo semifuno esine: ginkgo, resveratrol, okanye iSt John's wort.
Emva kokuthatha i-Flibanserin powder
Emva kokuthatha iFlibanserin, kubalulekile ukutsiba ukuba ungayigcina kwaye uyilahle njani, ngoku masifunde.
Ziziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela i-flibanserin?
Ukuthabatha eli liyeza nezinye iziyobisi ezenza ulale okanye unciphise umxinzelelo wakho wegazi unokuba yingozi ngakumbi. Buza udokotela wakho ngaphambi kokuthatha flibanserin kunye nepilisi yokulala, unyango lwe-narcotic, ubuhlungu be-muscle, okanye iyeza lokuxhalabisa, ukudandatheka okanye ukuthatha.
Tshela ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza akho kunye nanoma yimuphi uqala okanye uyeke ukusebenzisa, ngakumbi:
Olu luhlu aluphelelanga. Ezinye iziyobisi zingasebenzisana ne-flibanserin, kubandakanya imithi kunye neyeza-counter-counter-counter, amavithamini kunye nemveliso yemveliso. Akukho konke ukusebenzisana okunokwenzeka okudweliswe kule khokhelo lonyango.
Ncoma udoti Flibanserin 100 mg ngomlomo omnye ngosuku ngosuku lokulala
Ubude bonyango: Eli liza kufuneka liyeke emva kweeveki ze-8 ukuba isiguli asibibi ukuphucula iimpawu.
Iingxelo: Eli chiza alibonakalwanga ukuphucula ukusebenza kwezesondo, kwaye alubonakalwanga kunyango kuma-postmenopausal abesifazane okanye kumadoda.
Ukusetyenziswa: Utyando lwabasetyhini be-premenopausal abane-HSDD efunyenweyo, ekhuselekileyo yenzalo yesondo (i-HSDD) ebonakalayo, ebonakalayo ngesifiso esincinci sesini esenza ukuba kubekho ubunzima obucacileyo okanye ubunzima kunye nokungabikho ngenxa yesimo sezempilo okanye esinesifo sengqondo, iingxaki phakathi kobudlelwano, okanye iziphumo zonyango okanye ezinye iziyobisi.
Ukuba uqalise le Miphumo emva kokusetyenziswa kwee-Moderate okanye ezinamandla CYP450 3A4 Inhibitor:
-Qalisa le mveliso iiveki ze-2 emva kwesazi yokugqibela ye-CYP450 3A4 inhibitor.
Ukuba Ukuqalisa I-CYP450 3A4 Inhibitor Ukuqalisa Ukusetyenziswa Kweli Dakamizwa:
-Qalisa i-CYP450 3A4 inhibitor iintsuku ze-2 emva kwesilinganiso sokugqibela sesi siza.
Ukuba ukrokrela ukudlula ngaphezulu, qhagamshelana neziko lolawulo lobutyhefu okanye igumbi lexakeka ngokukhawuleza.Ungakwazi ukungena kunye neziko lokulawula ubuthi kwi-800-222-1222.
Ulahlekelwa Umthamo weFlibanserin
Ukuba ulahlekelwa umthamo we-flibanserin, thabatha umthamo wakho ozayo ngexesha lokulala ngosuku olulandelayo.
Sukuziphinda kabini kwiidosi okanye uthathe amayeza ongezelelweyo ukwenza idosi ephosiweyo.
Ulawulo olulawulayo kunye nolomeleleyo lwe-CYP3A4 inhibitors landa flibanserin iziphumo, ezinokubangela i-hypotension enkulu kunye ne-syncope
Ngako oko, ukusetyenziswa kwe-CYP3A4 inhibitors kusetshenziswe ngokuchanekileyo
Ukuchasana kwizigulane ezinobungozi obushushu
Ukungqinelana nokusetyenziswa kwanoma yiyiphi iqondo lokukhubazeka kwe-hepatic
Ukunyuka kweFlibanserin kwandise i-4.5 ngokuphindaphindiweyo kwizigulane ezinobungozi obunobungozi, xa kuthelekiswa nalabo abanomsebenzi oqhelekileyo we-hepatic, okwandisa umngcipheko we-hypotension, syncope, kunye noxinzelelo lwe-CNS
Ziziphi iimpembelelo zeFlibanserin?
Iziphumo eziqhelekileyo zeFlibanserin
Tshela ugqirha wakho ukuba ngaba ezinye zeempembelelo ezilandelayo ziba nzima okanye zingapheli:
Imiphumo emibi yeFlibanserin
Tshela ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba ufumana nayiphi na imiphumo emibi elandelayo:
Ukutyhafa okanye ukulahleka kwengqondo
Uxinzelelo olunzulu okanye ukulala
Iimpawu zengcinezelo ephantsi kakhulu yegazi (inokuquka ukuphathwa kwesikrini, isikhenkcelo, isikhumba somkhonto, umbono onqabileyo, ukudandatheka, okanye utywala)
Imiphumo emibi kunye nokusebenzisana kwezidakamizwa kunye ne-flibanserin kufuneka kuqondwe kakuhle ngumboneleli kunye nesigulane. I-Addyi iphikisana nokusetyenziswa kotywala, kwizigulane ezinobungozi besibindi, kunye nezigulane ezithatha i-CYP3A4 inhibitors eziphakathi kwe-CYP3A4. I-Addyi iyavunywa ngokucwangcisa ingozi kunye neqhinga lokunciphisa (REMS), elibandakanya izinto ukuze kuqinisekiswe ukusetshenziswa okukhuselekileyo (ETASU), kwakunye neSilumkiso seBhokisi eliMnyama. Idatha echaphazelayo yempembelelo ibonisa ukuba iziphumo eziqhelekileyo eziqhelekileyo ziyinkxwaleko, isisongela kunye nokulala. Umngcipheko wokuphelelwa amandla, ngakumbi xa udibene notywala, kukukhathazeka kakhulu. Ngenxa yolu dlelwane lwe-Addyi luya kufumaneka kuphela kwiinkonzo zonyango eziqinisekisiweyo kunye namayeza eqinisekisiwe. Abaqeqeshi bezempilo kufuneka bavavanye amathuba okuba isigulane sinqabe ngokunyanisekileyo phambi kokumisela i-Addyi kunye nee-pharmist kufuneka bacebise kule nxaxheba. Umngcipheko wokuphelelwa amandla uyanyuswa ngenxa yokusebenzisana kwezidakamizwa kunye ne-CYPXNUMXAXNUMX inhibitors ezinokulinganisela okanye ezinamandla eziphazamisa ukuphuka kwe-Addyi emzimbeni. I-FDA idinga ukuba umenzi enze izifundo ezongezelelweyo zokuthengisa ukuphucula ukucacisa ukusebenzisana phakathi kwe-flibanserin notywala.
Thenga iFlibanserin Powder
Kwimarike, kukho iintlobo ezahlukeneyo zokuhlanzeka Flibanserin powder, zihlala zivela kwi-60% -99%, i-Flibanserin powder enobunyulu obuphezulu obufana ne-99% ihlala ikwiBanga lezeMithi, elikhuselekileyo ukusebenzisa, iziphumo ebezingalindelekanga ezingaphantsi, linokuvelisa iziyobisi ezininzi Flibanserin. umyinge wokudlula, indlela yokuhambisa, nokuba umthengisi uthembekile, yeyiphi inkonzo… I-AAS izakukusombululela yonke le nto.
I-turinabol yomlomo yompu: Ngaba uyazi amaqiniso malunga ne powder steroid? I-Lorcaserin powder: Zonke izinto malunga nokulahleka kweziyobisi